नेहा कक्कड Archives - Lokpati.com
Tag - नेहा कक्कड
नेहा कक्कडकाे प्रस्तुतिमा तनाव, स्थिति असामान्य भएपछि ३ पक्राउ
काठमाडौं, २६ जेठ । राजधानीको ठमेलमा बलिउड गायिका नेहा कक्कडको प्रस्तुति चल्दै गर्दा गएराति तनाव भएको छ । आयोजकले क्षमता भन्दा बढी टिकट विक्रि गरेपछि दर्शकले विवाद गर्न थालेपछि प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो ।
बलिउड गायिका नेहा कक्कड काठमाडौं आउँदै
काठमाडौं, ७ जेठ। बलिउडकी चर्चित गायिका नेहा कक्कड पहिलो पटक काठमाडौं आउने भएकी छिन्। नेहा कक्कड पहिलो पटक काठमाडौंका दर्शक माझ प्रत्यक्ष प्रस्तुत हुने भएकी हुन्। २५ सय दर्शक क्षमता रहेको ठमेलस्थित लर्ड अफ ड्रिङ्क्स (एलओडी)मा...
काठमाडौंमा कहाँ–कहाँ हुँदैछ नेहा कक्कडको कन्सर्ट ?
काठमाडौं। बलिउडकी चर्चित प्लेब्याक गायिका ‘नेहा कक्कड’ काठमाडौं आउने भएकी छिन्। पछिल्लो समय अत्याधिक रुचाएकी गायिका कक्कडका धेरै गीत हिट छन्।
जसमध्ये ‘आँख मारे, काला चस्मा, दिलबर दिलबर, लण्डन ठुमकदा’ लगायतका गीतहरू पर्छन्।...
कोहलीसँगको ‘ब्रेकअप’पछि गायिका नेहा डिप्रेशनमा
एजेन्सी । वर्ष २०१८ मा बलिउडमा धेरै जोडीले वैवाहिक जीवनको सुरुआत गरे । तर, एक जना कलाकारको भने वर्ष २०१८ को अन्त्यमा आएर प्रेम सम्बन्ध चिप्लिएको छ ।
गायिका नेहा कक्कड र अभिनेता हिमांश कोहलीको प्रेम सम्बन्ध वर्षको अन्त्यमा...
कोहली-नेहा ब्रेकअप !
एजेन्सी । बलिउड एवं पञ्जाबी गायिका नेहा कक्कडले केही दिनदेखि प्रेमसम्बन्धका कारण चर्चामा थिइन् । फिल्म ‘यारियां’का अभिनेता हिमांश कोहलीसँग उनको नाम जोडिँदै आएको थियो । दुवैले इन्डियन आइडल शोमा आफ्नो माया दर्शाएका थिए ।...